Nepalistudio » राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म १५ पदमा यस्तो हुँदैछ वाम बाँडफाँट राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म १५ पदमा यस्तो हुँदैछ वाम बाँडफाँट – Nepalistudio
राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म १५ पदमा यस्तो हुँदैछ वाम बाँडफाँट
प्रदेश र प्रतिनिधिसभासँगै राष्ट्रियसभाको सिट बाँडफाँट सहज रुपमा टुंग्याएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र राजकीय पदहरु भागवण्डामा केन्द्रित भएका छन् ।
राजकीय पद बाँडफाँटमा वामपन्थी गठबन्धनले केन्द्र र प्रदेशलाई अलग-अलग क्लस्टर बनाउने भएको छ ।
पार्टी एकता संयोजन समितिले दुईवटा कार्यदलमार्फत सिटहरुको सफल बाँडफाँट गरेको थियो । ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सिट बाँडफाँड गर्‍यो भने सुवास नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यदलले राष्ट्रियसभाको सिट भागवण्डा मिलाएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन र राष्ट्रियसभाको सिट बाँडफाँटबारे गृहकार्य गर्न गठित कार्यदलले केन्द्रका पदहरुको बाँडफाँट गर्ने-नगर्ने पार्टी एकता संयोजन समितिबाट निर्णय हुनेछ । तर, समग्र पदहरुको बाँडफाँट एमाले र माओवादीबीच ६५/३५ प्रतिशत हुनसक्ने एक नेताले बताए ।
यसरी हुँदैछ प्रदेशको बाँडफाँट
६ सदस्यीय कार्यदलले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको पद बाँडफाँट गर्नेछ । कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार केन्द्रीय राजकीय पदहरुको बाँडफाँट गर्ने म्याण्डेट यही कार्यदलले पाउन सक्छ । तर, केन्द्रभन्दा पहिले प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद् गठन हुने भएकाले कार्यदलले प्रदेशको भागबण्डा टुंग्याउनेछ ।
पाण्डेले भने, ‘मोटामोटी एमालेले ४ र माओवादीले मुख्यमन्त्री दुई पाउने अवस्था छ । सभामुखमा पनि यही अनुपातमै बाँडफाँट गर्ने जनादेश छ । संविधानले जति मन्त्रीको व्यवस्था गरे पनि हामी छरितो र कम खर्चिलो हुने गरी मन्त्रीको संख्या बाँडफाँट गर्ने सोचमा छौं ।’
स्रोतका अनुसार एमालेले प्रदेश नम्बर १, ३, ४ र ५ मा मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना छ । त्यस्तै १, ३, ६ र ७ मा सभामुख पाउने गरी छलफल अघि बढ्दैछ । माओवादीले ६ र ७ नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा सभामुख पाउन सक्नेछ ।
यद्यपि, माओवादीले ४ सभामुख दाबी गरेको छ । एमालेले मुख्यमन्त्री लिएको प्रदेशमा आफ्नो र माओवादीको मुख्यमन्त्री भएको प्रदेशमा एमालेको सभामुख बनाउने उसको प्रस्ताव छ ।
कार्यदलका सदस्यहरुका अनुसार, प्रदेश सरकारमा पनि मन्त्रीहरुको बाँडफाँट ७०/३० को अनुपातमा हुनेछ । ‘प्रदेश नम्बर ५ र ६ मा ६०/४० होला, अन्य प्रदेशमा राष्ट्रियसभाको सिट बाँडफाँटकै मोडल लागू हुनसक्छ’ कार्यदलका एक सदस्यले भने । प्रदेशमा एमालेका ठूला नेताहरु पनि धेरै निर्वाचित भएको र माओवादीका कम भएका कारण नेताहरुको व्यवस्थापनलाई पनि भागबण्डाको आधार बनाइएको छ ।
नेताका व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकै कारण एमालेले प्रदेश ६ मा आफ्नो बहुमत भएपनि माओवादीलाई मुख्यमन्त्री छाड्ने सोचेको छ । किनकि एकल बहुमत नभएको प्रदेश ४ मा पार्टी सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र नेता किरण गुरुङ मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार छन् भने प्रदेश ५ मा शंकर पोखरेलको नाममा सहमति भइसकेको छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा भने मधेसवादी गठबन्धनको बहुमत भएका कारण बाँडफाँटमा परेको छैन । यद्यपि, मधेसी र वाम गठबन्धनबीच सहकार्य हुने नहुने अझै प्रष्ट भइसकेको छैन ।
केेन्द्रका १० पदमा कस्तो होला भागबण्डा ?
प्रदेशका राजकीय पदहरुको बाँडफाँट लगत्तै केन्द्रका पदहरुमा छलफल सुरु हुने एमाले र माओवादीका नेताहरुले बताएका छन् । केन्द्रका पदहरुलाई मुख्यतः १० वटा क्लस्टर बनाइँदैछ, जसमा राष्ट्रपतिदेखि संसदीय समितिका सभापतिसम्म पर्छन् ।
बाँडफाँड गरिने पदहरुलाई यसरी प्राथमिकताक्रममा राखिँदैछ
६. राष्ट्रियसभा अध्यक्ष
७. राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष
८. संघीय मन्त्रिपरिषद
९. प्रतिनिधिसभाका समिति
१०. राष्ट्रियसभाका समिति
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभमा दुवैमा वामपन्थी गठबन्धनको बहुमत हुने भएकाले एकाध समितिबाहेक अरु सबैमा एमाले माओवादीबीच भागबण्डा हुने देखिएको छ ।
यद्यपि, केन्द्रीय सरकारमा मधेसवादी दल आए यो समीकरणमा केही फरक पर्ने सक्छ । साथै संसदीय समितिमा भने विपक्षी दललाई पनि स्थान दिने एमालेका एक नेताले बताए ।
प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुने निश्चित छ । मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधिसभामा एमाले र माओवादीले पाएको सिट संख्याकै अनुपातमा बाँडफाँट हुने कार्यदलका एक सदस्यले बताए । त्यसो हुँदा मन्त्रिपरिषदमा एमाले ७० प्रतिशत र माओवादी ३० प्रतिशत हुनेछ । यद्यपि, माओवादीको दाबी मन्त्रिपरिषदमा ४० प्रतिशतकै छ ।
संसदीय समितिहरुको बाँडफाँट अहिले नै गर्न नसकिने कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘संसदीय समितिका सभापतिहरुको बाँडफाँट अहिले नै गरौं भन्ने कुरा आएको हो तर, कति समिति बन्छन् भन्ने टुंगो नभई बाँडफाटड गर्न मिलेन’, उनले भने ।
तर, वामपन्थी गठबन्धनमा राजकीय पद बाँडफाँट गर्न पेचिलो हुन सक्ने भनेको राष्ट्रपति र सभामुख हो । संविधान अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टी र फरक लिंगको हुनुपर्छ । अहिलेसम्म एमाले र माओवादी फरक-फरक पार्टी भएकाले चारवटै पद उनीहरुले नै बाँडेर लिन सक्ने सम्भावना छ ।
विद्या र पासाङको निरन्तरता ?
वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन दुवैले अबको ५ वर्षे कार्यकाल निरन्तरता चाहेका छन् । संक्रमणकालीन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चलाएको भन्दै उनीहरुले दोहोरिने इच्छा ओली र प्रचण्डसमक्ष परोक्ष रुपमा राखिसकेको स्रोतको दाबी छ ।
पार्टीभित्र अरु सन्तुलन मिलाउने र भत्काउने दुःख झेल्नुभन्दा अहिले भएकालाई निरन्तरता दिन ओली र प्रचण्ड सहमत भए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । पछिल्लो पटक राष्ट्रपति भण्डारी र प्रचण्डबीच भएका सघन भेटवार्ताहरुले पनि त्यसको संकेत गरेका छन् ।
शुक्रबारमात्रै उपराष्ट्रपति नन्दवहादुर पुन पासाङले पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अर्थपूर्ण भेटवार्ता गरेका छन् ।
ओलीको स्वास्थ्यस्थिति बुझ्न भनेर बालकोट पुगेका पासाङले आधा घण्टाको भेटमा राजनीतिक विषयमा पनि कुराकानी गरेको ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले बताएका छन् ।
प्रचण्ड निकट मानिने पासाङ जनयुद्धका सैन्य कमाण्डर हुन् । उनको व्यवस्थापनकै लागि माओवादीले एमालेलाई राष्ट्रपति दिएर २०७२ मा उपराष्ट्रपति लिएको थियो । अहिलेका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निरन्तरता ओली र प्रचण्डको लागि बाध्यता बन्ने सम्भावना छ ।
बादल बन्लान् राष्ट्रियसभा अध्यक्ष ?
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अहिलेकै दोहोरिएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले सभामुख दाबी गर्न सक्छ । यद्यपि, गठबन्धनमा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई एउटा क्लस्टर र उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षलाई अर्को क्लस्टर मानेर भागबण्डा गर्न खोजिँदैछ ।
माओवादीले रामबहादुर थापा बादललाई राष्ट्रियसभामा लगेर अध्यक्ष बनाउन चाहेमा सभामुख एमालेले पाउन सक्छ ।
राष्ट्रियसभाको सिट बाँडफाँटमा माओवादीले प्रदेश ३ मा एक खुला सदस्य लिएको छ, जुन सिट बादलका लागि सुरक्षित गरिएको अनुमान छ । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार सभामुख र अध्यक्ष तथा उपसभामुख र उपाध्यक्ष एक-एक सिट बाँडिने छ ।